नेपालका पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी रञ्जित श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण, के छ अवस्था ? — Imandarmedia.com
१भारतमा कोरोनाको दोस्रो लहरको सङ्केत : ४ राज्यमा एक हप्तादेखि निको हुनेभन्दा नयाँ संक्रमितको सङ्ख्या बढी
२देउवाले बोलाए कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूको बैठक
३‘नेकपा’ नामको विवादमा सुनुवाइ सकियो, के आयो सर्वोच्चले निर्णय ?
४सेफ’का उपविजेता सन्तोष साहलाई विमानस्थलमा पञ्चे बाजासहि स्वागत
६शिक्षकले तलब नपाएको भन्दै विद्यार्थीले नै गरे विद्यालयमा तालाबन्दी
७ओली समूहको स्थायी कमिटी बैठक स्थगित
८सत्ता समीकरणका विषयमा छलफल गर्न कांग्रेस पदाधिकारी बैठक बस्दै
९बझाङमा काेराेनाकाे जस्तै लक्षण विद्यार्थी र शिक्षकलाइ देखापरेपछि विद्यालय बन्द
१०नेपाली बजार फेरि घट्यो सुनको मूल्य, कतिमा हुँदैछ कारोबार ?
११विश्वभर कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु हुनेको संख्या २५ लाख नाघ्यो
१२संसद पुर्नस्थापना भएको २४ घण्टापछि ओलीले दिए यस्तो अनौठो प्रतिक्रिया, प्रचण्ड-नेपाल फायर
१०भागरथीको मोबाइलमा रहेका मेसेज, भिडियो, अडियो र कल विवरणबारे खुल्याे नयां रहस्य, प्रहरी समेत चकित
११काठमाडाैंमा समेत हिउँ परेका बेला मौसमसम्बन्धि यस्तो आयो ताजा अपडेट, हेर्नुहोस बिस्तृतमा
नेपालका पूर्व राष्ट्रिय फुटबल खेलाडी रञ्जित श्रेष्ठलाई कोरोना संक्रमण, के छ अवस्था ?
काठमाडौं । नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीका पूर्व सदस्य (खेलाडी) रञ्जित श्रेष्ठलाई कोरोना भाइरस संक्रमण भएको छ । वैदेशिक रोजगारीको सिलसिलामा हाल संयुक्त अरब ईमिरेट्स (यूएई)को दुबईमा रहेका श्रेष्ठलाई स्वाब परीक्षणको क्रममा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
रञ्जितले सामाजिक सञ्जाल फेसबूकमा भिडियो पोस्ट गर्दै आफूलाई कोरोना संक्रमण देखिएको बताएका छन् । कोरोनाको संक्रमण देखिए पनि आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थामा सामान्य रहेको उनको भनाइ छ । रञ्जितले सामाजिक सञ्जालमार्फत कोरोना भाइरससँग नआत्तिन पनि सबैसँग आग्रह गरेका छन् ।
उनी सन् २००९ मा बंगलादेशमा भएको साफ च्याम्पियनसिप प्रतियोगिता खेल्दा नेपाली टोलीमा थिए । घरेलु फुटबल प्रतियोगतामा भने उनी फ्रेण्ड्स क्बलमा आबद्ध भएर खेल्ने गर्थे । यसैबीच कोरोनाभाइरसका कारण विश्वभर २ लाख ८४ हजारभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ भने संक्रमितको संख्या ४१ लाख ९६ हजार नाघेको छ ।
जोन्स हप्किन्स विश्वविद्यालयका अनुसार नेपाली समयानुसार सोमबार मध्याह्नसम्ममा विश्वभर २४ घण्टाको अवधिमा तीन हजार ५१० जनाको ज्यान गएको छ । अघिल्लो दिन ४ हजार २४८ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
प्राप्त समाचार अनुसार विश्वभर करिब ४७ हजार मानिसको स्वास्थ्य अवस्था कोरोनाभाइरसबाट अत्यन्त जटिल रहेको छ भने २३ लाख ६५ हजार अर्थात् करिव ९८ प्रतिशतको अवस्था सामान्य छ । युरोपेली मुलुकहरुमध्ये बेलायतमा सबैभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ । पछिल्लो विवरण अनुसार बेलायतमा ३१ हजार ८५५ जनाको कोरोनाभाइरसका कारण मृत्यु भइसकेको छ ।
संयुक्तराज्य अमेरिकामा मृत्युदरमा उतारचढाव यथावत छ । पछिल्लो २४ घण्टामा अमेरिकामा ७ सय ५० जनाको मात्र ज्यान गएको छ जबकी अघिल्लो दिन यहाँ १ हजार ४२२ जनाको मृत्यु भएको थियो । योसहित अमेरिकामा मृत्यु भएका व्यक्तिको कूल संख्या ८० हजार ७८७ पुगेको छ ।
कोरोनाभाइरसबाट सर्वाधिक दैनिक मृत्युदर रहेका इटाली, स्पेन र फ्रान्समा २४ घण्टाको अवधिमा अघिल्लो दिनको झैं सामान्य रहेको छ । विगत २४ घण्टामा इटालीमा १६५, स्पेनमा १४३ र फ्रान्समा ७० जनाको ज्यान गएको छ ।